Maamulka Jubba oo iska fogeeyey weerarkii maanta iyo ciidamada Barre Hiiraale oo ka baxay Kismaayo
Taliye ku-xigeenka ciidamada maamulka Jubbaland Maxamuud Maxamed Qaalib ayaa beeniyay in ciidamadooda ay ka dambeeyeen weerar maanta ka dhacay magaalada Kismaayo kaasoo dil iyo dhaawac loogu geystay saraakiil ka tirsan Garabka Barre Hiiraale.
Qaalib ayaa taas bedelkeed ku eedeeyey weerarkaasi inay Mas’uul ka yihiin Al-shabaab isagoo xusay inaysan jirin ciidamo ka tirsan Maamulka Jubbaland oo wax weeraray.
“Weerarka Hotel kama dhicin Gaari uu saarnaa Yaasiin Raadeer ayaa rasaas lagu furay, waxaa ku dhaawacmay Yaasiin Raader, iyo rag la socday qaar kalena waa dhinteen, Maamulka Jubbaland Baaritaan ayuu ku wadaa dhacdadan” ayuu yiri Qaalib oo xusay ineysan jirin sabab ay u weeraraan saraakiishan, maadaama Kismaayo lagu keenay heshiis ay dhinacooda raali ka ahaayeen.
Warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya xaalada Yaasiin Raader oo ka mid ahaa saraakiishii maanta lagu weeraray magaalada Kismaayo, kuwaasoo qaarkood ay sheegayaan inuu geeriyoodaym, halka warar kalena ay sheegayaan inuu soo gaaray dhaawac halis ah, laguna daweynayo isbitaalka Kismaayo.
Afhayeenka Barre Hiiraale C/rashiid Gaas ayaa weerarkan ku eedeeyay iney ka dambeeyeen Ciidamada Maamulka Jubbaland.
Marka laga soo tago Hadalada labada dhinac ma jirto illo Madax banaan oo Xaqiijinaya cida ka dambeysay weerarka ka dhacay magaalada Kismaayo.
Dhinaca kale, warar laga helayo magaalada Kismaayo oo aan la xaqiijin ayaa sheegaya in ciidamadii iyo saraakiishii Col. Barre Hiiraale ay ka baxeen magaaladaas ka dib weerarkii maanta ayna dib ugu laabteen degaanka Goobweyn oo 30km woqooyi kaga beegan Kismaayo halkaasoo dhowr bilood ka hor laga soo kaxeeyey.